Muxuu Sheekh Umal uga jawaabay eedeyntii ahayd ‘in dad badan hadalkiisa lagu laayay’? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Sheekh Maxamed Cabdi Umal, oo ka mid ah culumaa’udiinka Soomaalida ayaa shaaciyay inuu maalinta Jimcada ah ee 22-ka bisha November, 2019-ka, garoonka Injineer Yariisoow ee magaalada Muqdisho ku qaban doono muxaarado, haseyeeshee waxaa arrintaas si weyn uga soo horjeestay Afhayeenka golaha guud ee Culimada Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomoow.
Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomoow ayaa shacabka Soomaalida ka dalbaday inaysan ka qeyb galin muxaadarada Sheekh Umal, isagoo ku eedeeyay inuu mas’uul ka yahay waxa uu ugu yeeray ‘musiibada ugu weyn ee ka jirta dalka’.
“Taasi waa dacaayad raqiis ah, aniga iyo isaga isma naqaanno, waligeenna iskama hor imaanin, dhaqaalahaasna anigu waxaan qeyb ka ahay guddiga guud”, ayuu yiri.
Previous Wasaaradda Maaliyadda Puntland iyo Bangiga Adduunka ayaa kala sixiixday mashruuc lagu hormarinayo
Next Gudoomiye Saleemaan oo laga yaabo in uu shaqada iska Casillo